Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Fanarenana miadana ho an'ny fitsangatsanganana rivotra aorian'ny orinasa COVID
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny fihanaky ny COVID-19 izay manery ny tontolon'ny orinasa hiasa amin'ny paikady fandaniam-bola, ny fandaniana amin'ny dia dia antenaina hiaina fitantanana avo lenta hahitana fotoana vaovao azo itehirizana.
Noho ny fihanaky ny COVID-19 dia mitady fomba hampihenana ny fandaniany ny orinasa.
Nisolo tena ny antsasaky ny vola miditra amin'ny seranam-piaramanidina ny mpandehandeha mialoha ny areti-mandoza.
Ny fitsangatsanganana an'habakabaka ho an'ny orinasa dia andrasana hihena 19 isan-jato.
Miaraka amin'ny fidiram-bola vokatry ny valan'ny COVID-19 dia mitady fomba hampihenana ny fandaniany ny orinasa. Nahatonga ny saina ho amin'ny dia an-habakabaka ataon'ny orinasa izany. Mialoha ny areti-mandoza, mpizahatany orinasa nisolo tena ny antsasaky ny vola miditra amin'ny seranam-piaramanidina lehibe, izay nahatratra 1.7 isan-jaton'ny harin-karena faobe global. Na izany aza, noho ny krizy mitohy, ny fitsangatsanganana an'habakabaka ho an'ny orinasa dia antenaina hihena 19 isan-jato.
Rehefa napetraka ny fameperana ny dia manerana izao tontolo izao, ny orinasa dia nanolo ny fivoriana mivantana tamin'ny virtoaly mba hiparitahan'ilay valanaretina. Orinasa maro no nifanaraka tamin'ny fivoriana virtoaly ary nahatsapa fa tsy ny fivoriana rehetra dia tsy maintsy atao manokana. Ny orinasa ihany koa dia nahatsapa tahiry be amin'ny fandaniana amin'ny dia an-habakabaka.
Amin'ny ho avy, ny fitsangatsanganana an'habakabaka dia ho fomba fitadidy sy fandinihana bebe kokoa, hahafahan'ny mpiasa manana fiainana mahay mandanjalanja kokoa ary ny mpampiasa hanana fiverenan'ny fampiasam-bola tsaratsara kokoa.
Mikarakara fivoriana virtoaly ny orinasa ary nanjary nisaina kokoa ho an'ny maro tamin'izy ireo ity modely ity. Tsapan'izy ireo fa tsy ilaina foana ny fivoriana ataon'ny olona. Ny maodelin'ny asa hybrid aorian'ny pandemioma izay mampifangaro ny fanatrehana mivantana sy virtoaly dia mety hahatonga ny orinasa hahomby amin'ny famerana ny vidin'ny dia ataon'ny orinasa. Ny mpiasa dia tsy tokony handeha raha tsy amin'ny fotoana ilaina indrindra. Ireto misy fepetra sasany raisin'ny orinasa hampihenana ny dia ataon'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sy ny fidiram-bola.
Ny fitantanana ny vidiny: Saika miatrika fahasahiranana ny indostria rehetra noho ny areti-mifindra amin'ny ambaratonga samihafa. Amin'izany, ireo orinasa dia mijery am-pahavitrihana ny fepetra ahazoana fidiram-bola raha azo atao. Ny famerana ny dia ataon'ny orinasa dia eo an-tampon'ny lisitra misy azy ireo, izay anafoanan'izy ireo ny dia tsy ilaina rehetra.